देउवाको पालो सकियो, अब हाम्रो: डा. शशांक कोइराला (भिडियोसहित)::Hamrodamak.com
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक द्धन्द्ध र विवाद समाधान गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय जिल्ला सभापतिहरुले सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध भेला नै गरे । विशेष महाधिवेशनको मागसमेत गर्न थालेपछि देउवा रुष्ट बनेका छन् । विशेष महाधिवेशनको कुरा किन उठ्यो ? देउवाको कमजोरी के हो ?
कांग्रेसभित्रको विवादलगायतका विषयमा ऋषि धमलाले महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँग कुराकानी गरेका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिनजको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा गरिएको कुराकानीको सानो अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।